नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाल र नेपालीलाई पनि चाहिएको छ यस्तै अरबिन्द केजरिवाल र उनले उठाए जस्तै सत्र मुद्धा उठाउने एउटा इमान्दार साधारण मान्छे ! छ कोही ??!! हेर्नुस यो भिडियो
नेपाल र नेपालीलाई पनि चाहिएको छ यस्तै अरबिन्द केजरिवाल र उनले उठाए जस्तै सत्र मुद्धा उठाउने एउटा इमान्दार साधारण मान्छे ! छ कोही ??!! हेर्नुस यो भिडियो
Posted by www.Nepalmother.com at 7:56 PM